Izvo Zvinhu Zvinokanganisa Kurumidza Kwako Peji Rako Kutakura PaWebhusaiti Yako | Martech Zone
Isu tanga tichisangana nemaonero mutengi nhasi uye tanga tichikurukura zvinokanganisa webhusaiti mutoro kumhanya. Pane kurwa kuri kuitika paInternet izvozvi:
Vashanyi vari kuda vapfumi zvekuona nemeso zviitiko - kunyangwe pane epamusoro-pixel retina inoratidzira. Uku kutyaira mifananidzo hombe uye resolution dzakakwirira dziri kuputika saizi yemifananidzo.
Tsvaga injini dziri kuda ultra kutsanya mapeji dzine mavara makuru anotsigira. Izvi zvinoreva kuti mabheti akakosha ari kushandiswa pane zvinyorwa, kwete mifananidzo.
Simba rekutsvaga riri kufambiswa ne zvinoshamisa zvemukati. Pasina zvako zvemukati kugovaniswa, iwe unogumira kugona kwayo kugadzira backlinks uye kunongedzera kune zvako zvemukati ... kutyaira pasi organic organic.
Icho chienzanidzo chiitiko chekambani chero ipi zvayo, saka ngatifambei nemapeji ekuremerwa uye panogona kunge paine mabhuroko emigwagwa.
Infrastructure - Zvivakwa zvemazuva ano zvinoshandisa fiber kumhanya-mhanya kubatanidza, solid-state madhiraivha, uye akakwira-mhanyisa CPUs kumhanyisa nzira yekushandisa, gore-based webhu sevha, uye dhatabhesi maseva. Kusvika uye kure, kuve neyako saiti inogarwa pamidziyo mitsva mune nyowani nzvimbo ine yepamusoro yekubatanidza ichapa yakanyanya mhedzisiro.
Domain Resolution - Kana peji ikakumbirwa, dura racho rinogadziriswa kuburikidza nezita revhavha. Chikumbiro ichocho chingangoita chiriporipocho, asi iwe unogona kugara uchiveura zvishoma kubva panguva yekukumbira uchishandisa a yakagadzirirwa DNS sevhisi.
Dhatabhesi Kugadzirisa - Mune yemazuva ano zvemukati manejimendi manejimendi, zvakakosha kuti dhatabhesi rako riwedzerwe kuti riwedzere nguva inotora kubvunza uye kupindura nedata pakushanya kusingawanikwe. Iyo zvakare tsika yakanaka kubata dhatabhesi pane rakasiyana server kubva kune yako webhu server asi munzvimbo imwechete.
Mutoro Wakaenzana - Tekinoroji iripo kuendesa akawanda maseva kuti vagovane mutoro wevashanyi pavari pane kungoisa mutoro zvese pane imwechete server. Iyi tekinoroji inopa mukana wekuenderera nekuwedzera mamwe maseva kudziva rako sezvo kudiwa kuri kuramba kuchikura… dzimwe nguva munguva chaiyo-yenguva.
Peji Inokumbira - Iyo nzira inotevera domain inobvunza yako zvemukati manejimendi sisitimu kana commerce system kuti uwane izvo zvirimo. Yako dhatabhesi indexing uye Hardware inogona kukanganisa iko iko iko iko kunotora izvo zvemukati.
Peji Caching - Mazhinji masevhisi epamusoro-anoshanda ewebhu anopa kugona kupfuudza chikumbiro kudhatabhesi uye kushandira zvirimo kubva cache.
Misoro Inokumbira - Mukati mezvirimo zvepeji, pane zvakajairika zviwanikwa senge zvinyorwa uye machira echitaera ayo anokumbirwa peji risati raiswa mubrowser. Zvakawanda zviwanikwa zvinogona kukwirisa yako peji kutakura nguva.
Peji Elements - Mabhurawuza anowanzoita zvikumbiro kudzokera kune imwechete sevha imwe panguva. Kana paine akawanda maseru kana subdomains, zvinhu zvinogona kukumbirwa panguva imwe chete. Mamwe makambani anotumira akawanda subdomains ezvinyorwa, machira emashita, uye midhiya kuti ishandise nzira mabhurawuza anoita izvo zvikumbiro. Kana iwe uri kurodha akawanda akanyorwa kana masitayiti, kuasanganisa iwo kuve mashoma mashoma mafaera kunovandudza mashandiro futi.
Zvekutanga Dhirivhari Network - Tenda kana kwete, jogirafi inotamba chinhanho munguva inotora kurodha yako saiti. Kana iwe uri padyo neserura yako, inokurumidza. Kana iwe uri mhiri kwekondinendi, inononoka. A CDN unogona kurodha mifananidzo yako mudunhu uye nekuvashandira nekukurumidza kune vateereri vako.
Kudzvinyirira - Webhu maseva anosanganisira gzip kumanikidza kwewebhu zviwanikwa, mifananidzo iri rakamanikidzwa, zvinyorwa uye CSS zvakagadziriswa kubvisa nzvimbo yekunze zvese zvinogona kuve nekuvandudzika kunoshamisa muwebsite mutoro wekumhanya.
Vane usimbe - Nei uchiremedza mifananidzo kana chinhu chacho chisiri kuoneka pane peji? Kana iwe ukacherekedza pane yedu saiti, sezvaunodongorera pasi peji iyo mifananidzo inotakurwa kana vachida kuti vazoonekwa kwete pane vese kamwechete. Kusviba kurodha kunogona kumhanyisa yako webhusaiti mutoro kumhanya zvakanyanya.
Asynchronous Kuisa - Hazvisi zvese zvinofanirwa kutakurwa pakarepo pane peji. Zvinhu zvakaita sekugovana magariro mabhatani, semuenzaniso, zvinogona kunge zvichinonoka uye kumisikidza kubrowser. Tag Management Services inogona kukubatsira iwe kurodha zviwanikwa mushure mekunge peji racho rapera pane kudzikamisa.
Mobile Kugadzirisa -Kupindura dhizaini kuri, nenzira kwayo, kwese kutsamwa izvozvi kuti upe zvinoenderana zviitiko zvevashandisi zvisinei nechitarisiko chechigadzirwa chako. Asi zvakare zvinogona kunge zviri kudzikisira pasi yako yekuona nhare - uko kuri kuwedzera muzana yevashanyi vari kusvika.
Video Formats - Kana iwe uri kusanganisira mavhidhiyo kumashure mune yako saiti, iwe unofanirwa kuona kuti akagadziridzwa uye akamanikidzwa kune yega yega browser. Vhidhiyo inononoka-kurodha inogona kudhonza pasi nguva yekutakura saiti uye kushungurudza vashanyi vako.
Heano achangobva kuburitswa infographic kubva Instart Logic pamawebhusaiti zvave sei mafuta, uye kukanganisa.
Tags: asynchronous kurodhaCompressioncontent delivery networkCSSresolution yedomaingzip kudzvinyiriraHeaderchikumbiro chemusororakachengetwa maraibhuraricompression yemufananidzonungo kurodhaload balancingkurira kumhanyanguva dzekutakuramobile optimizationpeji cachingpeji zvinhupeji chikumbiromutambosaiti mutoro kumhanyachimiro jirazvitaerakudzvanywa kwevhidhiyomafomati evhidhiyowebhu kuitawebhusaiti mutoro kumhanyawebhusaiti mutoro nguva
Chii chinonzi Zviri Mukati Dhirivhari Network (CDN)?
Aug 6, 2015 pa 11: 13 AM
Ndinobvumirana nezvose 12 pfungwa dzataurwa.
Nekukura webhusaiti traffic, ini ndinokurudzira kutama kubva pakugovera kugovera kuenda kuVPS kana WordPress hosting, uchitevera kune zvakanyorwa pamusoro.